Mpanamboatra sy mpamatsy FBA ambongadiny | Ara-potoana
Ny fandefasana entana any amin'ny trano fitahirizam-bokatra Amazon FBA dia heverina ho fanafarana B2B mankany amin'ny firenena itodiana. Te handefa lisitra any amin'ny trano fanatobiana entana any ivelan'i Shina ve ianao? Mety hahatsiaro ho sorena ianao, ilay mpanamboatra ...
Ny fandefasana entana any amin'ny trano fitahirizam-bokatra Amazon FBA dia heverina ho fanafarana B2B mankany amin'ny firenena itodiana. Ve ianao te-handefa lisitra ho any Amazon trano fanatobiana entana ivelan'ny Shina? Mety hahatsiaro ho sorena ianao, ny mpanamboatra dia mbola tsy nanomana entana FBA mihitsy, mila manazava hatrany hatrany ianao. Ankoatr'izay, ny fanafarana iraisam-pirenena dia sarotra be ary marary andoha foana. Tonga hanampy anao izahay izao. Tsy manome mpanjifa amin'ny mpamily pick-up tolotra amin'ny tanàn-dehibe any Shina, vokatra fametahaka marika, fanao fangatahany fahazoan-dalana amin'ny toerana halehany firenena, ary farany-kilaometatra fanaterana tolotra ho FBA trano fanatobiana entana ao amin'ny United Kingdom, Frantsa, Alemaina, Italia, Espaina, Etazonia, Kanada, sy Mexico. Na aiza na aiza misy anao, ny ekipanay mpanelanelana efa za-draharaha dia hanavotra anao amin'ny olanao manokana. Rivotra veentanalafo loatra amin'ny entam-be? Tsisy olana. Manohana ny fandefasana serivisy an'habakabaka na an-dranomasina any amin'ny trano fanatobiana entana FBA izahay. Ny serivisy roa dia tena afaka manampy anao hitahiry vola sy hahafeno ny fepetra takiana amin'ny tetibola.
Ahoana no manomboka miasa?
NY fampitaovana ny vahaolana dia manarona firenena sy faritra maherin'ny 200 manerantany amin'ny alàlan'ny serivisy paositra, tsipika manokana ary manehotaona. Avy amin'ny e-varotra tanteraka ny entam-barotra fanaterana
Azafady mba mifandraisa amin'ireo mpiasan'ny serivisy an-tserasera mba hisoratra anarana kaonty.
Alefaso amin'ny GZ Ontime ny vokatrao ary mamorona ny drafitra Amazon anao.
Ny mpamatsy anay dia tompon'andraikitra amin'ny fanamarihana ny vokatra sy ny fanomanana antontan-taratasy namboarina ho an'ny fandefasana.
Fenoy ny fadin-tseranana ary arotsaho amin'ny trano fitehirizam-bokin'ny FBA.
Teo aloha: Fanaterana an'habakabaka
Manaraka: Iraisam-pirenena maneho fanompoana fitaovana fandefasana DHL FedEx UPS Shina ho any Etazonia